ကြည် March 25, 2010 at 12:39 AM
ငယ်ငယ်တုန်းကလေ ဆရာမသမီးသိပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပဲ။ ဆရာမ သမီးဆို အားလုံးက၀ိုင်းချစ်တာခံရတယ်လို့ ထင်တယ်။ သက်ဝေက ဆရာမသမီးတစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုး။
khet myint myint March 25, 2010 at 1:49 AM
အစ်မသက်ဝေ (ဟိ ဒေါ်ဒေါ် ခေါ်တော့ပါဝူး)
တော်တော် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်နော် ဟိုးးး နှစ်ပေါင်းးးများစွာ (သံရှည်စွဲ၍ဖတ်)က အဖြစ်တွေမှတ်မိနေတာကိုး
အင်းးး ၂၀၀၉ ထဲက ၂၁ နှုတ်၊ မနှုတ်လောက် ၁၀ချေး၊ လက်၁၀ချောင်းထောင်၊ မနှုတ်လောက်သေးတော့ နောက်ထပ် ၁၀ထပ်ချေး.... အဲ..ဘယ်လောက်ရလဲဟင်င် ဒါမှမဟုတ် ၂၁ ပေါင်းချင်လဲပေါင်းကြည့်ပေါ့ အဟတ်ဟတ် နော့ပြီး ""ကျောင်းသားဟောင်းတွေပါတဲ့ နာမည်ကြီး တီးဝိုင်းတခုက"" ဆိုတော့ ကျနော်တော့ emperor band ကိုမြင်မိတာပဲ၊ တခြား တီးဝိုင်းလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့နော.... စကားမစပ် ဝိုင်းစု ကျောင်းထဲမှာ ရိုက်တဲ့ MTV ဆိုတာလေး ကြည့်ချင်လိုက်တာ... လင့်လေးး? ကျနော် ကြိုက်လို့ဗျ :P (ဝိုင်းစုကတော့ ဒဂုံ ၁ ကျောင်းသူဗျ :)
Anonymous March 25, 2010 at 2:56 AM
၄နှစ်နဲ့ ကျောင်းနေပြီလား မသက်ဝေ ။ ကံကောင်းလိုက်တာ။ မအယ် ကျိကျိကတော့ ၆ နှစ်ကျော်မှ သူငယ်တန်း တက်ရတယ်။ အိမ်နဲ့ ကျောင်းက ၄မိုင်ဝေးတယ် ပြီးတော့လည်း ၁၄၄ နဲ့မို့။
Anonymous March 25, 2010 at 4:36 AM
အဟမ်း ကိုးတန်းနှစ်ကတော့ ကျောင်းမှာ အပျော်ဆုံးနှစ်ပဲဆိုပဲ...
တစ်ကိုင်းတည်းနားတဲ့ ငှက်လေးတွေ သိပ်ပျော်မှာပဲလေ.. ပျော်မှာပေါ့..မော်မှာပေါ့ ချစ်သူနဲ့ပဲလေ။
ZT March 25, 2010 at 4:39 AM
မွေးစာရင်း တစ်ခု အပိုလုပ်လိုက်ရောပေါ့။ စင်ကျားပိုလို စာရွက်အတုလုပ်လို့ ထောင်ကျတဲ့ တိုင်းပြည်မှ မဟုတ်တာ။ :P ကျွန်တော်လည်း ၄ နှစ်ခွဲနဲ့ ကျောင်းနေတာပဲ။ ၁၀ တန်းအောင်တော့ ၁၅ နှစ်ခွဲပဲ ရှိသေးတယ်။
Hmoo March 25, 2010 at 5:57 AM
khin oo may March 25, 2010 at 6:16 AM
Vista March 25, 2010 at 9:36 AM
၄ နှစ်နဲ့ ကျောင်းနေတဲ့ မွေးစားရင်း ၂ခုနဲ့ အနော်ပါဗျ။
ကိုဇက်တီလိုပဲ ၁၀တန်းအောင်တော့ ၁၅နှစ်ပြည့်ယုံ ဟိဟိ။
ကျနော့်မှာတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကကျောင်းတူတူ၂ယောက်ရှိတယ် စလုံးမှာ။ ကျနော့်ကိုကိုနဲ့နောက်သူငယ်ချင်းကောင်လေး တစ်ယောက်ပေါ့။
Thant March 25, 2010 at 9:45 AM
ခဏ ခဏ ချိန်းတော့ ခဏ ခဏ တွေ့ရတာပေါ့လေ…အဟမ်းးး..အဟမ်းးး...အော်...မဖြစ်နိုင်ပါဘူး...အဲဒီတုန်းက ရိုးရိုးသားသားသူငယ်ချင်းတဲ့...ယုန်လိုက်ပါမယ်လေ........ :))))
P.Ti March 25, 2010 at 10:00 AM
ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေ ပြန်တွေးရင် ပျော်စရာတွေကြီးပဲ။ အထက်တန်းကျောင်းမှာတုန်းက ပျော်ခဲ့ပေမယ့် တက္ကသိုလ်တုန်းကလောက် အမှတ်တရ မကျန်ခဲ့ဘူးဗျ...
ဒေါ်မွန်နဲ့ တကျောင်းထဲထွက်ဆို... မိန်းကလေးကျောင်း ဟုတ်ဘူးလား... ဘာလို့ ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ ရောနေတာလဲဟင်...
နွေးနေခြည် March 25, 2010 at 10:07 AM
ပျော်စရာလည်း ကောင်း၊ လွမ်းစရာလည်း ကောင်းတယ် မမသက်ဝေ... တခါတလေ အဖြူအစိမ်းတောင် ပြန်ဝတ်ချင်တယ်း)
sonata-cantata March 25, 2010 at 10:53 AM
သက်ဝေတို့ ချစ်ကြည်တို့ ခြေရာတွေ အများကြီးရှိနေခဲ့တဲ့ ကျောင်းကြီးကို ညမှောင်မှောင်မှာ ဒီက ရောက်ဖူးနေခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့အဖေက ကျောင်းအုပ်ကြီးလား မြို့နယ်ပညာရေးမှူးလား မသိဘူး။ အဲ့ဒီကျောင်း အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ သူတို့ မိသားစု နေလို့ စာသွားမေးရတာလေ။ စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲကူညီခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းရဲ့ ကျေးဇူးကို ဒီပို့စ်နဲ့အတူ သတိရလိုက်ပါတယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း March 25, 2010 at 11:13 AM
kaungkinpyar March 25, 2010 at 12:01 PM
ပျော်စရာလေးတွေ ရေးရင် လွမ်းစရာလေးတွေ ဖြစ်နေတယ် ပေါ့...
Nge Naing March 25, 2010 at 4:17 PM
မသက်ဝေ ကျောင်းတုန်းကအကြာင်း ရေးထာဖတ်ရတော့ ကျွန်မလည်း ကျောင်းတုန်းက ငယ်ငယ်က ဘ၀တွေကို ပြန်သတိရသွားတယ်။ သူငယ်တန်းကနေ ၁၀ တန်းအထိ နှစ်တိုင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပေါင်းလာခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အကုန်မှတ်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးက အခုချိန်မှာ ကြံ့တွေ ဖွတ်တွေ ဖြစ်နေကြပြီ။
momiji March 25, 2010 at 5:49 PM
အမ ..မီးမီးလည်း၁၀တန်းအောင်စာရင်းထွက်တာတောင် ၁၆နှစ်ပြည့်သေးဘူး..
mirror March 25, 2010 at 7:28 PM
အမရေ.. လေးနှစ်နဲ့ကျောင်းစတက်လို့ ပထမတန်းရောက်ပြီးမှ သူငယ်တန်းပြန်ဆင်းပြီး သူငယ်တန်းကို ၂ ခါဖြေတာ ညီမရောပဲ...။ :)
အချစ်တော်ထားတဲ့ ရန်ကုန်က ကျောင်းသူတွေက ရီစရာ၊တချို့လဲ အိမ်ထောင်တွေကျ ကလေးတွေသာမွေးတယ်။ခုထိ သတိတရရှိနေတတ်ကြတဲ့လူတွေ မြင်ဖူးတယ်။ ဖြူဖြူစင်စင်ချစ်ခဲ့ကြလို့လား မသိဘူးနော်။
ဇွန်မိုးစက် March 25, 2010 at 8:56 PM
မမရေ..ကျောင်းတော်သာကို ဖတ်ရင်း ကြည်နူးရပါတယ်။ ဇွန်က မိန်းကလေးကျောင်းနေခဲ့ပေမယ့် အချစ်မထားဖူးလိုက်ဘူး။ အော်တိုတွေရေးရတာရော သူများရေးတာဖတ်ရတာရော သိပ်သဘောကျခဲ့တာ။ ဖြူစင်ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ မမေ့နိုင်စရာနေ့ရက်တွေပါပဲ မမရယ်။
ညီမလေး March 25, 2010 at 9:06 PM
ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ရမှ ညီမလေးလို အသက်မပြည့်ဘဲကျောင်းနေသူတွေ တော်တော် များမှန်းသိတော့တယ် ..း) ။
အပြုံးပန်း March 25, 2010 at 10:07 PM
ကွန်မန့်က မွန်ဆီမှာ ရေးတာနဲ့ အတူတူပဲ၊ :)
rose of sharon March 25, 2010 at 11:15 PM
လွမ်းစရာကြီးနော်... ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတော့ အမြဲသတိရနေမှာပေါ့....
ညီမလည်း မြို့မကျောင်းသူပါ။ ၁၉၉၇ မှာ ၁ဝတန်းအောင်ပါတယ်။
ဆရာမ သမီးဖြစ်တဲ့ မသက်ဝေးဆိုတာကို ညီမသိသလိုပဲ။ အစ်မက ၁၉၉၆ က ၁ဝတန်းအောင်တာများလား။
ဆရာမသမီးဆို ညီမတို့ထက် အသက်ကြီးတဲ့ (၈)တန်းကဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးရယ်
နောက် (၆)တန်းက ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးရယ်ပေါ့။ ဟိဟိ
nu-san March 26, 2010 at 5:31 PM
မမနဲ့ အမကိုကြီးက တကယ်ကို သူငယ်ချင်းအရင်း ခေါက်ခေါက်ကြီးတွေနော်.. တက္ကသိုလ်ရောက်မှ တွေ့တယ်လို့ ထင်ထားတာ.. အခုတော့ ငယ်ကျွမ်းဆွေတွေပဲ..:D အမရေးထားတာ ဖတ်ပြီး အစပိုင်းတော့ ပျော်ရတယ်.. အမ.. ကျနော်ဆို အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မဆုံဖြစ်တာ အနှစ် ၂၀ နီးပါးတောင် ရှိတော့မယ်.. သူတို့တွေကို သတိရလို့ FB မှာ ရှာကြည့်သေးတယ်.. မိန်းကလေးတွေ တစ်ယောက်မှ ရှာမရဘူး.. အမက ကံကောင်းတယ်. အခုထိ အနားမှာ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေ ရှိသေးတာ.. (အမကိုကြီးကိုတော့ ထည့်မတွက်နဲ့ပေါ့နော်.. ) :D
ချစ်ကြည်အေး March 26, 2010 at 10:21 PM
ဟွန်းဟွန်း...နောင်တရသွားမယ်နော်...ဒီပိုစ့်ကို လာရေးခိုင်းတာ...နာမည်ကိုက ချစ်ကြည်ဖွ လို့ပြောင်းတော့မှာ...ငှဲ ငှဲ....:))